ESI GỤỌ IHE NIILE VK N'OTU OGE - VKONTAKTE - 2019
Esi gụọ ihe niile VK n'otu oge
Otu ụzọ iji melite arụmọrụ ederede bụ iji dochie windo diski na windo siri ike (SSD). Ka anyị gbalịa ịchọta ụzọ isi mee nhọrọ dị mma maka ngwaọrụ nchekwa dị otú ahụ.
Uru nke a na-eji ígwè laptọọpụ arụ ọrụ
Ogologo ihe a pụrụ ịdabere na ya, karịsịa, nkwụsị nkwụsịtụ na ọrụ dịgasị iche iche dị oke okpomọkụ. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka laptọọpụ ebe ọnọdụ dị jụụ na-ahapụ ihe a chọrọ;
Enwe ike ike;
Ogo arụmọrụ dị elu.
Akpa, ị ga - ekpebi ihe SSD ga - eji, ma a ga - eji ya dị ka usoro naanị ma ọ bụ ma ọ ga - echekwa nnukwu faịlụ, egwuregwu nke oge 40-50 GB. Ọ bụrụ na akpa ikpe a ga - enwe oke ụda na 120 GB, mgbe ahụ na nke abụọ kwesịrị ịṅa ntị na ụdị ndị nwere ikike ka ukwuu. Nhọrọ kachasị mma ebe a nwere ike ịbụ disks nke 240-256 GB.
Ọzọ, anyị na-ekpebi ebe ntinye, nhọrọ ndị a ga-ekwe omume:
Ntinye kama ikuku ngwa. Iji mee nke a, ị ga-achọ ntanetị pụrụ iche, nhọrọ nke ịchọrọ ịma ọkwa (dịka 12,7 mm). N'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịchọta ngwaọrụ na 9.5 mm;
Na-agbanwe isi HDD.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịmeworị nhọrọ na mpaghara ndị ọzọ, nke kwesịrị ekwesị iji tụlee n'ihu.
Nke mbụ, mgbe ị na-ahọrọ, ịkwesịrị ịṅa ntị na ụdị nke nchekwa ejiri. A maara ụdị atọ - ndị a bụ SLC, MLC na TLC, na ndị ọzọ niile bụ ihe mgbaru ọsọ ha. Ihe dị iche bụ na na SLC, e debere otu ozi n'ime otu cell, na MLC na TLC - abụọ na atọ ibe n'ibe, n'otu n'otu.
Nke a bụ ebe a na-agbakọ akụ akụ disk, nke dabere na ọnụọgụ nchekwa nchekwa. Oge na-arụ ọrụ nke TLC-nchekwa bụ nke kasị ala, ma ọ ka na-adabere n'ụdị onye nchịkwa. N'otu oge ahụ, disks na ibe ndị ahụ na-egosi kacha mma ịgụ ọsọ ngwa.
Gụkwuo: Na-atụle ụdị nchekwa nchekwa NAND
Ụdị njirimara ihe
Ihe kachasị SSD bụ ihe dị sentimita 2.5. Anakwa mara mSATA (Obere-SATA), PCIe na M.2, nke a na-eji na kọmpụta kọmpụta na ultrabooks. Isi okwu nke ntụgharị data / nnyefe ọrụ bụ SATA III, ebe ọsọ nwere ike iru 6 Gbit / s. N'aka nke ọzọ, na M.2, enwere ike ịgbanwe ihe ọmụma site na iji CATA ma ọ bụ ụgbọ ala PCI-Express. Ọzọkwa, na nke abụọ, a na-eji usoro NVMe nke oge a, nke a kwadoro maka SSD, nke a na-eji ọsọ ọsọ ruo 32 Gbit / s. MSATA, PCIe na M.2 na-emepụta ngwa ngwa bụ kaadị mgbasa ma na-ewe obere ohere.
Na nke a, anyị nwere ike ikwu na tupu ịzụrụ, ị kwesịrị ịmara onwe gị na teknụzụ maka laptọọpụ na ebe nrụọrụ weebụ na-emeputa ma chọpụta ọnụnọ nke njikọ ndị dị n'elu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enwere njikọ M.2 na akwụkwọ mpịakọta ahụ na nkwado maka usoro NVMe ahụ, a na-atụ aro ka ịzụta mkpọchi kwekọrọ ekwekọ, ebe ọ bụ na nnyefe data ga-elu karịa onye na-achị SATA nwere ike inye.
Ngalaba dị ka ịgụ / ide ọsọ ọsọ na akụ disk na-adabere na mgbawa akara. Ndị na-emepụta gụnyere Marvell, Samsung, Toshiba OCZ (Indilinx), Silicon Motion, Phison. Ọzọkwa, ndepụta abụọ nke ndepụta ahụ na-emepụta ndị na-achịkwa nwere nnukwu ọsọ na ntụkwasị obi, n'ihi ya, a na-eji ha eme ihe maka ngwọta maka ọnụ ọgụgụ na ndị ahịa nke ndị na-azụ ahịa. Samsung nwekwara njirimara ntinye ngwa ngwa.
Gbasara Silicon Motion, Ndị na-achịkwa Fison nwere ọnụahịa dị mma nke ọnụahịa na arụmọrụ, ma ngwaahịa ndị dabeere na ha nwere nkwarụ dị otú ahụ dịka enweghị ike ịde / ịgụ ọrụ na nkwụsị na ọsọ ọsọ mgbe disk jupụtara. A na-ebute ha maka mmefu ego na ngalaba.
SSDs nwekwara ike ime na SandForce na-ewu ewu, JMicron ibe. Ha n'ozuzu ha na-egosi ezigbo utịp, ma ndị na-adọkpụ na-adabere na ha nwere ala dị ala ma na-anọchi anya ya na mpaghara mmefu ego nke ahịa ahụ.
Ndị na-emepụta ihe nkata bụ Intel, Patriot, Samsung, Plextor, Corsair, SanDisk, Toshiba OCZ, AMD. Tụlee obere diski nke kachasị mma n'àgwà ha. Dịka nkatọ nhọrọ ịhọrọ olu.
Rịba ama: Ndepụta dị n'okpuru ebe a na-ewe nkezi ọnụahịa n'oge ederede a: March 2018.
Samsung 850 120GB nke dị na ụdị nke 2.5 "/M.2/mSATA. Ọnụ ọnụahịa nke diski bụ 4090 rubles. Njirimara ya bụ ihe kasị mma na arụmọrụ klas na afọ 5.
Ịgụ akwụkwọ: 540 MB / c
Ihe ederede ederede: 520 MB / s
Na-eyi nkwụsị: 75 Tbw
Ụdị Ncheta: Samsung 64L TLC
ADATA kacha SU650 120GB nwere ọnụahịa kachasị mma na klaasị, ka ọ bụrụ kpọmkwem 2,870 rubles. O kwere omume ịmata ọdịiche dị iche iche nke SLC-caching algorithm, nke a na-enyefe ohere niile nke ngwa ngwa. Nke a na-acho achi achi achoro. Ụdị dị maka ihe niile bụ isi.
Ịgụ akwụkwọ: 520 MB / c
Ihe ederede ederede: 320 MB / s
Na-eyi nkwụsị: 70 Tbw
Ụdị Ncheta: TLC 3D NAND
Ntughari si na 128 ruo 240-256 GB
Samsung 860 EVO (250GB) - Nke a bụ ihe nlereanya kachasị ọhụrụ site na ụlọ ọrụ otu aha maka 2.5 "/M.2/mSATA. Mgbe mmalite nke ahịa na-efu 6000 rubles. Dịka nlele ahụ, diski nwere nguzogide kasị mma na klaasị ahụ, ọnụ ahịa ya na-abawanye na olu.
Ịgụ akwụkwọ: 550 MB / c
Na-eyi nkwụsị: 150 Tbw
SanDisk Ultra II 240 GB - n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ Western Western, nke a na-ejikarị ụdị akara a ere ere. Nke a bụ SanDisk Ultra II, nke na-eji onye njikwa Marvell, nke a na-ere ugbu a na ihe dị ka 4,600 rubles.
Ihe ederede ederede: 500 MB / s
Na-eyi nkwụsị: 288 Tbw
Ụdị Ncheta: TLC ToggleNAND
Drives na ikike site na 480 GB
Intel SSD 760p 512GB - Ọ bụ onye nnọchianya nke usoro ọhụrụ nke SSD si n'aka Intel. Na-enweta naanị na ihe M.2, ọ nwere nnukwu ọnụego ọsọ. Ọnụahịa ahụ na-adịkarị elu - 16 845 rubles.
Ịgụ akwụkwọ: 3200 MB / c
Ihe ederede ederede: 1670 MB / s
Ụdị Ncheta: Intel 64L 3D TLC
Ahịa maka SSD MX500 Mkpa 1TB bụ mkpụrụ osisi iri na abụọ na iri ise, nke na-eme ka ọ bụrụ disk dị mfe na ụdị a. Ugbu a dị naanị na SATA 2.5 bụ isi ihe kpatara ya, ma onye ọrụ emeela ọkwa ụdị M.2.
Ịgụ akwụkwọ: 560 MB / c
Ihe ederede ederede: 510 MB / s
Ụdị Ncheta: 3D TCL NAND
Ya mere, anyị nyochaa njirimara maka ịhọrọ SSD maka laptọọpụ, mara ọtụtụ ụdị dị na ahịa taa. N'ikpeazụ, ịwụnye usoro na SSD nwere ezi mmetụta na arụmọrụ ya na ntụkwasị obi ya. Ngwaọrụ kachasị ngwa ngwa bụ M.2, ma elebara anya ma a ga-enwe njikọ dị otú ahụ na laptọọpụ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ụdị ọhụụ ọ bụla na-ewukwasị ibe gị na TLC, ọ na-atụ aro ka ị tụlee ụdịdị nke MLC na-echekwa, ebe akụ na ụba dị elu. Nke a bụ eziokwu karịsịa mgbe ị na-ahọrọ diski usoro.
Hụkwa: Ịhọrọ SSD maka kọmputa gị